GIS la qaadi karo, wax kasta oo ka yimid USB - Geofumadas
Sebtember, 2009 Geospatial - GIS, GvSIG, qgis, uDig
Waxaa la sii daayay version of 2 GIS Portable codsi si fudud u cajiib ah in uu ordo ka drive dibadda ah, ul USB iyo xitaa a barnaamijyada digital lagama maarmaanka u ah maareynta macluumaadka aan ollogga ah ee desktop iyo webcam labadaba.
Immisa ayuu miisaamayaa?
file rakibayo miisaamaa 467 MB, laakiin waxa ay qaadataa ugu yaraan 2GB lacag la'aan ah USB ah si loo soo dajiyo, maxaa yeelay, mar unpacked iyo ordaya 1.2 GB socdaa intii loo baahan yahay.
Waa maxay barnaamijyada aad ka mid tahay?
Waa wax cajiib ah waxa uu sameeyo, sababtoo ah laga bilaabo xasuusta USB wuxuu barnaamijyada soo socda u maamuli karaa:
Shirkadda GIS ee Software
PostgreSQL (8.4.01) (PgAdmin III iyo Tools Psql)
Barnaamijyada adeega shabakadda:
Macluumaadka Database MySQ
Server Datagre Postgre server
Codsiyo dheeraad ah:
FWTools: ogr, gdal, python, khariidadaha, openEV (2.4.2)
Waxa kale oo ay soo galaan adeegyadan:
SqlSync (udub dhexdhexaadinta xogta database)
GeoMetadataExtractor (waxay ku darsataa metadata sawirada geo-referenced)
Shp2Text (wuxuu furtaa faylasha shp, oo leh iskuxirid iskudhacyo)
Ogr2Gui (GUI loogu talagalay qalabka OGR)
ShapeChecker (jeegag iyo hagaajinta faylasha qaabdhismeedka)
Sida uu u shaqeeyo
Qalabixiyaha ayaa si fudud loo soo dejiyey, la fuliyay, iyo meesha ay tahay in la xiro. Tani waxay abuureysaa wax la fulin karo oo ku jira liiska, fayl la yiraahdo "usbgis" kaas oo ku jira dhammaan barnaamijyada iyo xataa faylka autorun.info.
Mar kasta oo USB-ku xiran yahay, waxay u baahan tahay "Gabilsiyada GIS ee la qaadi karo" in la fuliyo, si ay nidaamku u aqoonsadaan waddada uu shabakadda u xilsaaray qaylada. Ka dib markaa, waxa kaliya ee la isticmaalayo barnaamijyada iyo muddada. Waa ku fiican tahay in la shaqeeyo kombiyuutarada shabakada netka ah, ama in lagu socodsiiyo xasuusta markaad safrayso ama xoqayso xafiisyada aan lahayn qalab go'an.
Mid ka mid ah meelaha soo jiidashada ugu weyn waa codsiyada nooca server-ka, kiiska Apache ama geoserver, taas oo kaliya in la barto si ay u rakibaan markii ugu horeysay waqti fiican; kiiskan waxaa lagama maarmaan ah in la riixo "bilaabida" ama "joojinta" badhanka si aad u joojiso.
Barnaamijyada OpenLayers, Tilecache iyo Featureserver ayaa ka shaqeeya faylka index.html, mar haddii Serverka Apache http://localhost).
Xaaladda QGis, waxaa ka mid ah Grass, kaliya dooro diiwaanka marka ugu horreysa ee fulinta markii ugu horeysay (.. \_ usbgis \_ apps \_ Quantum GIS \_ cawska). Sidoo kale waa lagama maarmaan in la sameeyo sidaas haddii aad ku xirto kombiyuutar kale oo nidaamkuna magac kale ku qoro cutubka.
PortableGIS waxaa loo adeegsadaa shatiga GPL waxayna ka shaqeeyaa oo keliya nidaamka qalliinka ee Windows.
Halkan ayaad ka soo dejisan kartaa.
Post Previous«Previous Dhibaatada ka jirta Honduras ... ayaa sii socota
Post Next Allallsoft, kaararka Google, Yahoo, Bing iyo OSMNext »
10 Jawaab "GIS la qaadi karo, dhammaanba USB"
Ed isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantihiin, aad bay u shaqeysaa.
Danilo isagu wuxuu leeyahay:
Noocee ayaa ah midka uu gvsig ka mid yahay, waan kala soo degaa nooca v5.2 iyo v5.6 mana keenin. Just qgis aniga iyo waxaan dhib ku qabey sameynta shaandhaynta mana ii ogolaaneyso inaan tafatirka lakabka sameeyo, miyay sababtu tahay waa la qaadi karo?
Jaime Sánchez isagu wuxuu leeyahay:
Febraayo, 2015 at
Waxaan ku rakibay GABI-ga la kashifo, laakiin QGIS oo keliya ayaa la rakibay, barnaamijyada kale ee GIS-ga lama rakibin, qof ayaa ogyahay sababta.
Manuel Valderrama isagu wuxuu leeyahay:
Xaqiiqdii, waxaan ka helay gudaha http://www.faunalia.com/usbgis
Hello Colleague, mar kale aniga ayaa ka yimid Chile. Hal su'aal, miyaadan ogayn halka uu xiriirkani tagay?
Qaamuus iyo salaan ka soo Chile!
Sidaa darteed wax fikrad ah, waa inay ganaaxaan.
Dhowr su'aalood, intee le'eg tahay barakac?
Miyaa khariidad ku taal in ka badan hal degmo UTM?
Haddii aad khariidadda gawaarida u soo dhoofiso kml una furfurto Google Earth, ma baad tahay?
Waad ku mahadsan tahay jawaab celinta
In geoserver ee cidda ku riday variable SRS 900913 kaas oo la isticmaalayo maps google la map wadada si fiican u soo bandhigay, laakiin halkii geliya in Spain map xaq España.Como waxa aan xal u heli karo ?.
Qaab noocee ah ayaad u leedahay inaad hayso faylka lagu muujiyo khariidada?
Dhab ahaantii dhibaatadu waxay tahay, in lakabka wadadaagu yahay UTM iyo Khariidadaha Google waxay ubaahan yihiin isuduwid juquraafi ah.
Waxaan laga bilaabo GeoServer iyo OpenLayers. Waxaan leeyahay lakabka ah ee wadada Waxaan doonayaa in aan ka tago kor map Google, laakiin geoserver uusan i sii aan khadadka midig, halkii khadadka sida dhibco. In Console tomcat siinayaa baadi soo socda:
Isticmaalka suurtagalka ah ee saadaalinta 'Tranverse_Mercator' oo ka baxsan aaggadiisa ansax.
Latitude waa bannaanka xadka loo oggol yahay
Qof kasta ogyahay waxa ay noqon karto?
Laura isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan isku dayayaa inaan galo lakabka (faylka dheeraadka ah .shp) oo leh qadar gaaban si ay u kaydiso xogta gambaleelka postgres. Marka feylka la geliyo wuxuu ku siinayaa qaladka soo socda:
Dhibaatooyinka gelinaya feylka feylka:
C: \_ Dukumentiyada iyo Meelaha \_ user \_ Desktop \_ tests \_ pc.shp
Diiwaanka ayaa bixiyay qalad markii uu fulin lahaa SQL:
INSERT INTO "dadweyne".
Qaladku wuxuu ahaa:
ERROR: safka cusub ee xiriirka «file_p» wuxuu ku xadgudbay caqabadda hubinta «hirgelinta_dims_the_geom»